Waxaan hore u ognahay taariikhda la sii daayo iyo qiimaha Doogee S98 cusub | Qalabka Wararka
Waxaan horey u ognahay taariikhda la bilaabayo iyo qiimaha Doogee S98 cusub
Qolka Ignatius | | Mobiles
28-ka Maarso, Doogee S98 wuxuu ku dhici doonaa suuqa, the Casriga cusub ee casriga ah ee soo saaraha Doogee, oo loo yaqaan telefoonka gacanta, waxayna ku samayn doontaa qiimo hordhac ah oo gaar ah oo ah $239, qiimo hordhac ah oo la heli karo inta u dhaxaysa March 28 iyo April 1.
Qiimaha caadiga ah ee qalabkani waa $339, markaa soo jeedinta hordhaca ah waxay noo ogolanaysaa in aan badbaadino 100 dollar. Intaa waxaa dheer, waxaan ka qayb qaadan karnaa isku aadka 4 Doogee S98 iyada oo loo marayo shabakadeeda. Laga bilaabo Maarso 28 ilaa Abriil 1, waxaan ka iibsan karnaa Doogee S98 239 Dollar en AliExpress y doogeemall.
1 Doogee S98 muxuu inoo hayaa
1.4 Battery ilaa 3 maalmood
2 Halkee laga iibsan karaa Doogee S98
Doogee S98, waxaa maamula processor-ka Helio G96 ka MediaTek. Iyada oo la socota processor-ka, waxaan helnaa 8 GB oo RAM ah iyo 256 GB ee kaydinta, kaydinta aan ku ballaarin karno isticmaalka kaarka microSD.
Doogee wuxuu ka kooban yahay 2 shaashad. Midka koowaad iyo kan ugu weyn wuxuu leeyahay cabbir 6 inches. Shaashadda labaad, waxaan ka helnaa gudaha dhabarka oo wuxuu leeyahay cabbir 1,1 inji ah.
Shaashadan dambe, waxaan ku arki karnaa waqtiga, maamul dib u soo celinta muusiga, ka jawaab wicitaanada, hubi heerka batteriga, arag fariimaha nasoo gaadhay...
Kaamirada oo ka mid ah qaybaha ay isticmaalayaashu aad ugu xisaabtamaan, ragga Doogee jooga ayaa si gaar ah isha ugu haya. Dhabarka dambe ee qalabka, waxaan ka heli 3 lenses:
64 MP dareeraha ugu weyn
8 MP xagal ballaaran iyo
20 MP dareeme aragga habeenkii oo ay samaysay Sony.
Kamarada hore waxa samaysay Samsung waxayna leedahay a 16 MP qaraar.
Battery ilaa 3 maalmood
Iyadoo a 6.000 mAh baytariga, Doogee S98 wuxuu leeyahay madax-bannaani 2 ilaa 3 maalmood iyadoo si dhexdhexaad ah loo isticmaalo qalabka.
Waxay ku habboon tahay ku dallaca degdega ah ilaa 33W, oo ay ku jiraan dabeysha isku awood ah. Waxa kale oo ay la jaanqaadi kartaa dallacaadda wireless-ka.
Halkee laga iibsan karaa Doogee S98
Doogee S98 cusub ayaa laga heli doonaa Aliexpress iyo Doogeemall oo leh xiriirinta hordhaca maqaalka. Marka xayeysiisku dhamaado, qiimuhu wuxuu noqonayaa $339. Haddii dhaqaalahaagu aanuu ogolayn, waxa kale oo aad heli kartaa mid ka mid ah 4 Doogee S98 oo ay soo-saareyaashu ku raffle websaytka ay ku leeyihiin xidhiidhada kor lagu tilmaamay.
Wadada buuxda ee maqaalka: War gadget » Telefoon » Mobiles » Waxaan horey u ognahay taariikhda la bilaabayo iyo qiimaha Doogee S98 cusub
Roborock waxay keentaa faaruqinta bartamaha sidoo kale